हिजो माधव नेपाल पक्षले केपी ओलीलाई गरेको कारबाही हामीले बिर्सिएका छैनौं : राजन भट्टराई (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १० बैशाख । नेकपा (एमाले) का नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच सहमति नहुनुको कारण माधव नेपालले अनुचित अडान राखेको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. […]
ओलीको स्पष्टीकरणपत्रविरुद्ध माधव नेपाल समूह सर्वोच्चमा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधेको विरोधमा माधव नेपाल पक्ष सर्वोच्च जाने भएको छ। पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न दबाब सिर्जना गर्दा कारबाही गर्ने मनशायले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै नेपाल पक्ष सर्वोच्च जाने भएको हो। नेता बेदुराम भुसालले अहिले छलफल भइरहेको र केहीबेरमा सर्वोच्च जाने जानकारी दिए।
‘केपी ओली आत्तिएको कारण ४२ जिल्लामा माधव नेपाल पक्ष बलियो हुनु हो’
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहले आफूहरु ४२ जिल्लामा बलियो भएको बताएका छन् । मंगलबार एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकमा बोल्दै असन्तुष्ट समूहका नेता माधवकुमार नेपालले आफूहरु ७७ मध्ये ४२ जिल्लामा बलियो भएको बताएका हुन्।
करिब चार महिनापछि भएको एमालेका दुवै पक्ष (केपी शर्मा ओली पक्ष र माधव कुमार नेपाल पक्ष)बीचको छलफल सकिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको छलफलमा पार्टीमा देखिएको विवाद समाधनका विषयमा वार्ता भएको बुझिएकाे छ। यद्यपि, भेटवार्तामा के भयो भन्ने सा...
धनगढीमा केपी ओली र माधव नेपाल पक्षीय कार्यकर्ताबीच झडप
कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय धनगढीमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । बोर्ड र नेमप्लेट राख्ने विषयमा विवाद भएपछि दुई पक्षका कार्यकर्ताबीच झडप भएको धनगढीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रतीक विष्टले उज्यालाेलाई जानकारी दिनुभयो । बुधवार बिहान नेकपा एमालेको माधव समूहले पार्टी कार्यालयमा राखेका बोर्ड, ओली समूहले हटाएर नयाँ बोर्ड राखेको थियो । ओली समूहले सुदूरपश्चिम इन्चार्जको कार्यकक्षमा लेखराज भट्टको नेमप्लेट राखिएको ...
केपी ओलीमाथि थप अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने भयो : माधव नेपाल
१ माघ, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीमाथि अनुशासनको थप कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि घोषणा गरेपछि सत्तारुढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । विघटनलाई असंवैधानिक भनेको प्रचण्ड–माधव समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक राखेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई […]